Salama mpilalao PUBG, eto izahay miaraka amin'ny fampiharana hacking farany, izay fantatra amin'ny anarana hoe PPK INJECTOR. Io no hack farany an'ny PUBG-Mobile vanim-potoana 14, izay manolotra bala aimbot, auto-head ary majika, ary manolotra Skins maimaim-poana ihany koa.
Araka ny fantatrao dia ny PUBG dia iray amin'ireo lalao an-tserasera marobe marobe, izay tsy maintsy hamoahanao ny mpanohitra anao ary ny tanjona tokana dia ny ho lehilahy mijoro farany. Noho izany, manolotra fomba tsotra aminao izahay hahazoana ny mpanohitra anao ary hanao sakafon'ny akoho betsaka araka izay itiavanao azy.
Misy fampiharana hafa, izay manolotra ireo tolotra ireo, fa nahoana isika no manafoana ity fampiharana ity? Izany dia satria novolavolaina tamin'ny teknolojia farany indrindra izany, izay mahatonga azy io ho azo antoka kokoa ny fampiasana azy, miasa tsara ny fitaovana hacking rehetra.
Raha te hampiasa an'io fitaovana io ianao hitrandrahana PUBG-M, dia amporisihinay ianao hahafantatra momba ity fampiharana ity alohan'ny hampiasana azy. Hizara fomba samy hafa izahay, izay ahafahanao mampiasa an'io fitaovana io, nefa tsy mahazo fandrarana kaonty sy fiasa hafa koa. Noho izany, mijanona miaraka aminay hahafantatra izany.
Topimaso momba ny PPK INJECTOR
Izy io no fitaovana Android farany indrindra, izay ahafahanao mijirika PUBG vanim-potoana 14. Izy io dia manolotra ny hiasa amin'ny fitaovana faka sy tsy misy faka. Manolotra fomba azo antoka sy fomba mahagaga amin'ny alalan'ny, izay azonao mamono, mpilalao hafa. Hozarainay aminao ny endri-javatra rehetra amin'ity fampiharana ity izay azonao atao aorian'ny fidirana amin'ity fitaovana ity.
Izy io dia manome sokajy samihafa ho an'ny serivisy tsirairay. Ao amin'ny menio Anti-ban voalohany, azonao atao ny mamela ny fitaka samihafa. Izy io dia manolotra ireo serivisy rehetra tsy maintsy ataonao alohan'ny hanombohana lalao amin'ny fomba samihafa. Ny iray amin'ireo zavatra tsy maintsy ataonao dia ny mamela ny lobby bypass avy aminy.
Ny sokajy faharoa dia manolotra anao hampiasa fitaovam-piadiana. Ao anatin'izany dia ho hitanao ny hacks rehetra, izay mihatra amin'ny fitaovam-piadianao toy ny Auto Headshot, izay ahafahanao maka headshots mora foana. Amiboot Super dia manolotra anao ny hampidina ny fahavalonao haingana kokoa sy ny bala majika farany.
The Injector dia manolotra anao hanova ny lokon'ny lanitra, izay ahafahanao mahita ny mpifanandrina aminao haingana kokoa sy mazava kokoa. Azonao atao ny manova ny lokon'ny lanitra ho loko isan-karazany toy ny mena, mainty na mavokely. Izy io koa dia manolotra anao fiara haingana, izay ahafahanao manatsara ny hafainganam-pandeha mankany amin'ny hafainganam-pandeha ambony.
Azonao atao ihany koa ny mamela ny fiara manidina, izay ahafahanao manidina ny fiaranao na ny fiaranao amin'ny rivotra. Manome anao hoditra maimaim-poana ao anaty menio hoditra aza izy. Mila mamela ny hoditra tianao hampiasaina fotsiny ianao dia hiseho izany. Ny sasany amin'ireo hoditra tsara indrindra amin'ny M416 dia misy ihany koa toy ny Gloden Trigger, The Fool, ary maro hafa.
anarana PPK INJECTOR
Anaran'ny fonosana com.pubgprokiller.ppkvips
Endri-javatra lehibe an'ny PPK INJECTOR
Araka ny efa nolazainay ny sasany amin'ireo fiasa ao amin'ilay fizarana etsy ambony, fa misy endri-javatra maro kokoa taonina. Azonao atao ny mahita azy ireo, rehefa manomboka mampiasa azy ianao. Ao amin'ny lisitra eto ambany dia hizara ny sasany amin'ireo endri-javatra lehibe an'ity fampiharana ity izahay.
Maimaim-poana ny hoditra
Interface dia mpampiasa-namana
Araka ny fantatrao dia tsy azo antoka hampiasaina na oviana na oviana ireo karazana fampiharana ireo, saingy misy ny fomba tsara indrindra hampiasana an'io fitaovana io raha tsy mahazo fandrarana. Madhav Gamer Vip dia rindranasa virtoaly, izay ahafahanao mitahiry ny PUBG sy ny PPK Injector PUBG. Azonao atao ny mandefa azy ireo amin'ity virtual ity ary mampiasa azy soa aman-tsara.
Ahoana ny fampidinana ny PPK INJECTOR Apk?
Io no fitaovana farany. Noho izany dia tsy misy amin'ny tranokala hafa io, fa izahay rehetra no nitondra ity fampiharana ity. Mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao eto amin'ity pejy ity, izay ho eo an-tampon'ny sy eto ambany amin'ity pejy ity. Kitiho eo izany ary miandry segondra vitsy, hanomboka ho azy ny fisintomana.
Aorian'ny fandefasana ity rindranasa ity dia mila teny miafina ianao hampiasa ireo fiasa. Izahay hizara ny teny miafina aminao. Azonao atao ny mampiasa an'io mba hamaha ny teny miafinao.
Teny miafina: 954548
PPK INJECTOR no hack farany ho an'ny PUBG notadiavinao, izay tsy vitan'ny manolo-tanana ny mpanohitra. Fa manome anao ny hoditra rehetra koa maimaim-poana. Mila misintona an'ity rindranasa ity fotsiny ianao.
Sokajy Games, Tools Tags Injector, PPK Injector, PPK Injector Apk, PPK Injector PUBG Post Fikarohana
Followergir Apk 2022 Download ho an'ny Android [Insta Followers]